KARACHI (92 News / ICC) - Pakistan skipper Azhar Ali akati neChitatu anoda kuti kudzoka kweCricket cricket munyika ive yeisingakanganwike sezvo timu yake ichitsvaga kukunda Sri Lanka kuKarachi kutanga neChina.
Achitaura nevatori venhau pamberi peyedzo yechipiri yePakistan neSri Lanka, mushure memakore gumi vachitamba zvisipo, Azhar akati Pakistan inoda kwazvo kushandisa zvakanyanya kumba. "Tiri kutamba mutambo wekumusha uye tinoda kushandisa mari iyi zvakanaka," akaudza vatori venhau. "Tinoda kuhwina nhepfenyuro idzi toita kuti chiitiko chiyeuke."
Azhar Ali akataura kuti kana mutambi asiri kuita kana asiri kuridza anomhanyisa ipapo kushoropodzwa paari zvinoruramiswa. Akabvuma kuti anga achigona kutamba nguva pfupi yadarika asi akavimbisa kuti achaedza kutamba iro rakamirira kugogodza muKarachi.
“Paunoita, vanhu vanokurumbidza uye kana iwe usingaite, unotsoropodzwa. Ndakamirira kugogodzwa kukuru uye ndichaedza kuridza iro pano muKarachi ndichirwa neSri Lanka, ”Azhar akaudza vezvenhau kuKarachi.
"Paunoridza cricket yepasi rose uye ukasaita zvinobva zvashoropodzwa zvinoruramiswa uye uchafanira kuzvitambira. Sezvazviri handikwanisi kuita izvo zvandinofanirwa kunge ndichiita uye ndiri kuedza kukunda izvo. Ndichiri kushanda nesimba uye ndicharamba ndichiedza, ”uya wechikamu weKwayedza apo achiwedzera kuti panguva yaainzwa kutadza kuchengeta mucherechedzo, anozvinyudza.
Achitaura nezveKunedzwa kweKarachi, Azhar Ali akataura chivimbo chekuti Pakistan timu ichaenda kunohwina mapoinzi mazhinji kubva kuChipinge kunatsiridza chinzvimbo chayo pamatafura eICC emakwikwi.
Pakistan, Sri Lanka giya kumusoro kweKarachi Test
Mushure mekutanga kuedzwa kweTest pakati pePakistan neSri Lanka muRawalpindi, tarisiro dzakakwirira pamberi peChipiri Test, nekufanotaura kunonongedza mamiriro ekunze ekunze muKarachi kubva China, 19 Zvita.
Kudzoka kwakanyanya-kutarisira kweC Test cricket muPakistan - iyo Rawalpindi Test ndiyo yaive yekutanga munyika mumakore anopfuura gumi - yakaguma zvine mutsindo, paine chete 167 overs yekutamba inogona kuitika mumazuva mashanu nekuda kwemvura uye kwakaipa mwenje.
Kunyangwe zvakadaro, mukutamba kudiki uko kwaigoneka, kwaive nemazana matatu asina kurohwa mazana emakore, zvikwiti zvisere, uye kutenderera kwakanakidza varaidzo vepamba mune yaive yemakwikwi akanaka.
KuPakistan kunyanya, mazana emakore kubva kunetsa Abid Ali naBabar Azam, iyo No.9-inogovaniswa batsman muMRF Matairi eCC Muedzo weVatambi, chikonzero chetariro yakanaka, kunyanya kupihwa fomu raAzhar Ali, kaputeni wavo. Mune gumi nemaviri Testings, Azhar haana kupora hafu yezana-makore, uye iri ratidziro yezvakawanda zvaangashuvira kuchinja.
Sri Lanka, parizvino, ichave isina Kasun Rajitha, iye akasimudza kuruboshwe nyundo nyowani muRawalpindi. Asitha Fernando, uyo ane makore makumi maviri nematatu akakurumidza, akashevedzera padivi kuti adzorere vakakuvadzwa Suranga Lakmal, ari munzira yekuita test yake Dutare, dai manejimendi akasarudza kuenderera mberi nekurwiswa kwevanhu vatatu.
MuRawalpindi, Sri Lanka skipper Dimuth Karunaratne naOshada Fernando vakapa vashanyi kutanga kwakanaka. Asi avo vakomana vepakati-yekudenga batsal Kusal Mendis naDinesh Chandimal vakadzingwa zvakachipa, Dhananjaya de Silva asati abatsira kumutsidzira mairi. Mvura yakadzora yakawanda yakasara yeTest. De Silva akakwanisa kusvika zana rake pazuva rekupedzisira, uye akabatsira Sri Lanka kusundira ivo vakapfuura 300-mucherechedzo vasati vazivisa.
Pakistan yakarasikirwa nekuvhura kwayo Shan Masood pasina mhosva mune yavo yekutanga mairi, uye kapteni Azhar akateedzana. kusvika 252/2 mvura isati yakamanikidza kutanga stumps pazuva rekupedzisira.
Azhar Ali, kaputeni wePakistan: "Ndanga ndichinzwa kusatya, ndotaridzika zvakanaka, ndokubuda. Hazvina kumbobvira zvakanaka kuva mumamiriro ezvinhu akadaro. Ndine chivimbo, ndinovimba ndichavaka pazviri mumutambo unotevera. "
Dimuth Karunaratne, Sri Lankan kaputeni: “Mabheti akafamba zvakanaka, uye zvinosiririsa kuti mazuva mashoma apera kubviswa. Tine mamwe mapepa, anoda kudzidza kubva kuzvikanganiso zvedu toenderera mberi. Isu tinofanirwa kutarisa iyo positives uye nekuona kuti inoenda sei muKarachi. Ndinovimba, haina kunaya. "
Forecast ndeyekudenga kwezuva muKarachi. Muedzo wekupedzisira wakaridzwa muKarachi National Stadium waivawo pakati peSri Lanka nePakistan, munaFebruary 2009, uye panguva iyoyo, yaive paradhiso yekurwisa; Sri Lanka yakarova 644/7 yakaziviswa mune yavo yekutanga innings, chete kuti vaone Pakistan vachipindura ne765 / 6 yakaziviswa.